Iclọ Ọrụ Mgbasa Ozi Silicone Mkpesa Wetting Wetting SILIA-2001 Factory and Pricelist | Honneur
Ekwentị: +86 (021) 67189181
Agụụ na-emegide amfụfụ
Onye nnọchi anya ya
Ihe inyeaka tupu ọgwụgwọ
Ihe ịchọ mma sịlịkọn Silicone
Mpụga Mịpụta Sịlịkọn
Mkpesa / Wetting
Silicone hydraalul na-ejedebe
Ihe eji emechi Silicone
D4 D5 D6 Silicone
Akpụkpọ anụ & mkpuchi
Ihe nnọchianya nke Silicone
Ihe nnọchianya Silicone
Agụụ Wetting Silicone
Na-asọpụrụ silicone emulsion
igbochi silicone mmanụ 3300
Hydrogen silico na-egbochi
Acidic Mbelata Acidic…
hydrophilic silicone soften ...
Mgbakwunye Ihe Mgbasa Ọkụ Silicone nke SILIA-2001
SILIA-2001 Ọrụ Mgbasa Agriclọ Ọrụ Mgbakwunye Silicone na Wetting
Ọdịdị ： enweghị agba amber mmiri
Viscosity （25 ℃ ， mm2 / s） ： 25-50
Esemokwu elu （25 ℃ ， 0.1% ， mN / m） ： <21
Njupụta （25 ℃） ： 1.01 ～ 1.03g / cm3
Uzo igwe ojii （1% wt ， ℃） ： <10 ℃
SILIA-2001 Mgbasa Ọhịa Silicone na Wetting
bụ trisiloxane polyether gbanwere na ụdị silione surfactant nke nwere ikike dị ukwuu nke ịgbasa na banye. Ọ na - eme ka mmiri ahụ erughị ala gbadata ruo 20.5mN / m na ntinye nke 0.1% (wt.). Mgbe agwakọtara ya na ọgwụ ọgwụ na - egbu mmiri na ọnụego ya ụfọdụ, ọ nwere ike belata mmụọ ozi kọntaktị n'etiti ntan ma ọ bụ akwụkwọ, nke nwere ike ime ka mkpuchi nke ịgba. Ọzọkwa, SILIA-2001 Silicone Agricultural
Readgbasa na Penetrating Nnọchiteanya nwere ike ime ka ọgwụ na-egbu ọgwụ site na stomatal nke akwụkwọ, nke dị oke mma maka imeziwanye arụmọrụ, belata ego nke ọgwụ na-egbu egbu, ịchekwa ego, belata mmetọ ikuku nke nje na-akpata.
Agent Super na-agbasa ma na-abanye
T Esemede elu ala
. Obere ụfụfụ
Iji belata onodu ogwu nke na eme ka aru di ike.
Iji mee ka mkpuchi nke koria na-amụba
Iji kwalite mmelite nke ngwa nri (toleranc ka mmiri ozuzo)
Ọdịdị enweghị agba amber mmiri
Viscosity （25 ℃ ， mm2 / s） 25-50
Esemokwu elu （25 ℃ ， 0.1% ， mN / m） <21
Ngosiputa （25 ℃） 1.01 ～ 1.03g / cm3
Uzo igwe ojii （1% wt ， ℃） <10 ℃
Ejiri dị ka ihe na-enye ọgwụ ịgba: SILIA-2001 nwere ike ime ka mkpuchi nke ndị na-agbanye spraying, Vpromote the
bulie ma belata usoro onodu ogwu a si puta. SILIA-2009 bu nke kacha adi nma mgbe
ọ bụkotakota lẹ mkpụkpu
(i) n'ime uzo PH nke 6-8,
(ii) kwadebe ngwakọta ịgba ya ozugbo
jiri ma ọ bụ n'ime nkwadebe 24h.
Ejiri mmanu gwakọtara na ilu
Na mkpokọta, tinye SILIA-2001 (4000times) 5g na ntanye 20kg ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ chọrọ ịkwalite adsorption nke sistemu ọgwụ mgbochi, dịkwuo ọrụ nke ọgwụ na-akụ ọgwụ ma ọ bụ belata ego nke ịgba n'ihu, ọ kwesịrị ịgbakwunye ọnụego ojiji nke ọma. Na mkpokọta, ego dị ka ndị a:
Osisi na-akwalite onye na-achịkwa 0.025% ～ 0.05%
Ihe ogwu ogwu 0.025% ～ 0.15%
Ọgwụ na-egbu egbu 0.025% ～ 0.1%
Ogbu nje 0.015% ～ 0.05%
Fatịlaịza na Chọpụta mmewere 0.015 ～ 0.1%
Mgbe ị na - eji ya, bu ụzọ gbazee ọgwụ na - egbu mmiri, gbakwunye SILIA-2001 mgbe ịgwakọta mmiri 80%, tinye mmiri na 100% ma jikọta ya otu. A na-adụ ọdụ na mgbe ị na-eji Mgbasa Ọhịa Silicone na Penetrating, ka mmiri belata 1/2 nke nkịtị (tụrụ aro) ma ọ bụ 2/3, iji ọgwụ eji egbu egbu belata ka 70-80% nke nkịtị. Iji obere oghere imi ahụ ga-eme ka ọpụpụ ngwa ngwa
200Kg, 1000Kg, ma ọ bụ 20Kg plastic gbọmgbọm, ma ọ bụ ruo ndị ahịa rịọrọ.
Nchekwa na nchekwa - ndu
Mgbe echekwara na nkwakọ ngwaahịa mbụ ya na temprechọ dị n'etiti -20 ° C na + 50 ° C,
Enwere ike ịchekwa SILIA-2001 ruo ọnwa 12 site na mgbe arụpụtara ya (ụbọchị mmebi).
Soro ntuziaka nchekwa na ụbọchị mmebi akara na nkwakọ ngwaahịa ahụ. Datebọchị a gara aga, Shanghai Honneur Tech anaghị ekwe nkwa na ngwaahịa a ezuru oke ire ahịa.
Nke gara aga: Ihe ndozi maka mmanu di iche iche
Osote: Mgbakwunye Silicone Mkpesa Wetting Onye nnọchi anya SILIA2008
Mgbasa Ọhịa Silicone na Wetting
Nlekọta anti-phenolic yellowing (BHT)
Tẹ: +86 （021） 67189181
Adreesị: 120lọ 1209, Nwupụta 2 #, No.1588 ụzọ Huhang, Fengxian District, Shanghai 201401 CHINA